ပင်မစာမျက်နှာ ဥရောပဘောလုံးပြိုင်ပွဲ ပြင်သစ်ဘောလုံးကစားသမား Kylian Mbappe ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
LB အကောင်းဆုံးအမည်ဝှက်ခြင်းဖြင့်လူသိများနေတဲ့ဘောလုံးကြယ်ပွင့်များ၏အပြည့်အဝပုံပြင်တင်ဆက်; မိုနာကို၏ "ဒီ 2nd မင်းသား ''။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Kylian Mbappe ကလေးဘဝပုံပြင်ပေါင်းမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ရက်စွဲကိုမရောက်မှီတိုင်အောင်သူ၏ကလေးဘဝအချိန်ကနေသင်တို့ကိုမှတ်သားလောက်ဖြစ်ရပ်များနှင့်ပြည့်ဝ၏အကောင့်တတ်၏။ analysis ကျော်ကြားမှု, မိသားစုဘဝနှင့်သူ့ကိုအကြောင်းကိုအများအပြား OFF နှင့် on-အသံနည်းနည်းလူသိများအချက်အလက်များရှေ့တော်၌မိမိဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိပါဝငျသညျ။ Begin ပေးနိုင်ပါတယ်;
Kylian Mbappe ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက် -အစောပိုင်းကလေးဘဝဘဝ
Kylian Mbappé Lottin မိမိအကင်မရွန်းဖခင်မစ္စတာ Wilfried Mbappe (ကနည်းပြ) နှင့်အယ်လ်ဂျီးရီးယားမိခင်, Fayza Mbappe Lamari (တစ်ဦးဖြစ်သူလက်ပစ်ဘောလုံးကစားသမား) က 20th ဒီဇင်ဘာလ 1998 အတွက်ပဲရစ်၏မြောက်ဘက်-အရှေ့, Bondy မွေးဖွားခဲ့သည်။ မိမိဘွားပြင်သစ်ကသူ၏ဇာတိမြို့ကနေ 1998km ခဲ့သည့် Stade de France မှာ 11 ကမ္ဘာ့ဖလားအနိုင်ရအတိအကျခြောက်လနောက်သို့လိုက်ကြ၏။ တစ်အားကစားမိသားစုသို့မွေးဖွားခဲ့သည်တစ်ဦးရောနှောပြိုင်ပွဲကလေးသည်အဖြစ်, တဦးတည်းအရာငယ်ရွယ်လူကလေးများအတွက်အချို့ဖြစ်ခဲ့သည် "ဘောလုံး။"
"ငါ့သား Kylian ငါသူရူးရဲ့ထင် football- အကြောင်းကိုအသည်းအသန်ထက်ပိုပါတယ်။ သူဟာနီးပါးဈတစ်ဦးဘောလုံးနည်းပြအဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တွေ့မြင်ပင်ယျတျောသညျအကြှနျုပျကိုပယ်တတ်၏။ သူက 24 /7သို့အမြဲပါပဲ။ Kylian အရာအားလုံးကိုချောင်းမြောင်း။ သူကတတန်းအတွက်လေးငါးပွဲစောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ "
အချိန်ဦးစားပေးအားမိမိစွမ်းရည်ကိုဘောလုံး၌သူ၏ထိရောက်မှုကိုပြသသည်။ သူကဒီမိုကရေစီနည်းကျသူ့အချိန်ကုန်ဘူး။ သူဟာဘောလုံးဘို့အချိန်ရစေနိုင်ရန်အတွက်အပြည့်အဝကြိမ်အခြေခံပေါ်မှာကျောင်းသွားတူသောအရေးမကြီးသောအရာတို့ကိုရန်မဟုဆိုသည်။ ဟုတ်ကဲ့, မိသားစုနှင့်ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေများနှင့်အတူသူ့အချိန်အရေးကြီးသောခဲ့ပေမယ်သောနောက်ဘောလုံးနှင့်အခြားဘာမျှမမြို့သို့ရောက်လေ၏။
သူကရှေ့ကိုတစ်ဦးဘယ်ဖက်ဖြစ်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူနှင့်မည်သို့အမြန်ကျဲကျဲခံရဖို့။ သင်ယူခြင်း dribbling ထွက်ကျန်ရစ်မခံခဲ့ရပါဘူး။ ဤသူသညျမိမိဂိမ်းတီထွင်ဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့သည်။
6 ၏အသက်အရွယ်မှာသူပြင်သစ်ရဲ့အကောင်းဆုံးဆိဘောလုံးသမား၏တစ်ချိန်ကအဖြစ်ရှုမြင်ခဲ့သည်။ ဤသူသည်ပြင်သစ်ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ကအသိအမှတ်ပြုတယ်တဲ့အချိန်ပဲ။ Kylian ကလေးတစ်ဦးအဖြစ်ကြီးသောအမှုတို့ကိုပြည့်စုံ။ အကြိမ်ပေါင်းများစွာသူသည်ငြူစူခြင်းနှင့်ကွောကျရှံ့တစ်ပြည်နယ်ရှိသူ၏မိတ်ဆွေများကထွက်လာခဲ့တယ်။
တောင်မှကလေးတစ်ဦးအဖြစ်, Mbappe အောင်မြင်သောဖြစ်လာဖို့စွမ်းရည်ဆောင်သွားကြ၏။ သူကသူ့ကိုယ်ပိုင်အထူးဆုလက်ဆောင်နှင့်အခွက်တဆယ်တပ်ဆင်ထားခဲ့သည်။ သူလုပ်ခဲ့တယ်တူသောအထက်ပုံမှာမည်သူမျှထိပ်ကဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ သူတို့ထဲကတချို့ကလမ်းတစ်လျှောက်သူတို့ရဲ့လမ်းကြောင်းဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။
Mbappe သေချာတဲ့အချက်အားမိမိအောင်မြင်မှုမြင်ယောင်။ ဒါဟာသူ့ကြမ္မာဆီသို့သူ့ကိုသယ်ဆောင်သည်ဟုမိမိကိုမိမိ၌သူ၏စိတ်ကူးစိတ်သန်းများနှင့်ယုံကြည်ချက်ဖြစ်ခဲ့သည်။
Kylian Mbappe ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက် -မိသားစုဘဝ
ဖခင်: ဖခင် Wilfried Mbappe ကင်မရွန်းနှင့်နိုင်ဂျီးရီးယားထံမှသူ၏အမြစ်တို့တွင်ဖြစ်ပါတယ်နှင့် (စာအရေးအသား၏အချိန်ကကဲ့သို့ပင်) AS Bondy မှာနည်းပြအဖြစ်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ သူဟာတစ်ချိန်ကရေကြည်ရာမြက်နုရာများအတွက်ပြင်သစ်မှပြောင်းရွှေ့လာသောသူတစ်ဦးခိုလှုံရာဖြစ်ခဲ့သည်။ မစ္စတာ Wilfried တစ်ဦးအမြဲတမ်းနေထိုင်ရမယ့်လေလံအတွက်အယ်လ်ဂျီးရီးယား-ပြင်သစ်အခြေစိုက်နိုင်ငံသား, Fayza လက်ထပ်တယ်။
သူကနှစ်ဦးစလုံး pals အများကြီးအသက်ငယ်စဉ်အခါကာလ၌ခြောက်လပြန်၏အသက်အရွယ်မှာသူ့သား Kylian လေ့ကျင့်တော့တာပဲ။
သူကသူ့သားတစ်ဦးဘောလုံးအေးဂျင့်ကလက်ရှိဖြစ်ပါတယ်။ သူ Adeyemi Mbappéအမည်ရှိညီငယ်မှနည်းပြသုံးစွဲသည်။
Mother: Mbappe ရဲ့အဖေသည်သူ၏အားကစားစိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်မျိုးဗီဇအပေါ်လေပြီဖို့တစ်ဦးတည်းသာမဟုတ်။ Fayza Lamari မွေးဖွားမယ်တော် Fayza Mbappe အယ်လ်ဂျီးရီးယားမူရင်းဖြစ်ပါသည်။ သူမသည်ဟောင်းတစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်လက်ပစ်ဘောလုံးကစားသမားဖြစ်ခဲ့သည်။
Fayza Mbappe ပြင်သစ်၏မာနထောင်လွှားဘောလုံး mom, ဖြစ်ပါတယ် prodigy တိုက်စစ်မှူး, Kylian Mbappe ။ မိမိကိုယ်ကိုဟောင်းတစ်ဦးအားကစားသမားဖြစ်ခြင်း, Fayza Mbappe ရုံသိတယ် ဘယ်လောက်လဲ အလုပ်လုပ်အဲဒါကိုအတွက်လုပ်ယူ အဆိုပါပရော်ဖက်ရှင်နယ် လယ်ပြင်။ ယခင်လက်ပစ်ဘောလုံးကစားသမားပဲရစ်၏မြောက်ဘက်-အရှေ့ဘက်တွင်ဒီဇင်ဘာလ 20, 1998 အပေါ်သား Kylian ကြိုဆိုခဲ့ကြသည်။ သူမသည်သူ့ကိုသို့ကြီးထွားစောင့်ကြည့်လျက်ရှိသည် ငယ်ရွယ်ချော လူနှင့်အရေးအကြီးဆုံးကတော့ကမ်ဘာပျေါမှာအရေးကြီးသောကစားသမားတဦး။ သူမသည်လတ်တလောတွင် Bondy, ပြင်သစ်တွင်နေထိုင်သည်။
Kylian Mbappe မှတစ်နှစ်ခွဲညီအစ်ကိုဖြစ်၏ ကွန်ဂိုလျောက်ပတ်သောသူသည် Jires Kembo-Ekoko ။ သူ၏အဖေဟောင်းတစ်ဦးဘောလုံးသမား, အ 1974 ကမ္ဘာ့ဖလားအတွက်ဇိုင်ရီဘို့ featured သူမစ္စတာ Wilfried Mbappe ၏ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေတစ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
သူကနောက်ဆုံးမှာသည်သူ၏ဥပဒေဆိုင်ရာအုပ်ထိန်းသူဖွစျလာသူမစ္စတာ Wilfried Mbappe အတူနေဖို့ကလေးတစ်ဦးအခါ Jires ပြင်သစ်မှရွှေ့ပြောင်း။
သူဟာကမ္ဘာကြီးကိုဘောလုံး၏လမ်းကြောင်းတောက်နေသည်ကသူ့အသက်အရွယ်မှာသူကိုနုပျို Kylian ထက် 10 နှစ်ပေါင်းအဟောင်းတွေဖြစ်တယ်။ အဆိုပါညီအစ်ကိုနှစ်ယောက်အဖြစ်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားမှတ်နှင့် Jires Kylian ရဲ့ပထမဦးဆုံးရုပ်တုကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ သူဟာတစ်ချိန်က Rennes မှာမိမိပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘောလုံးကစားခဲ့ပါတယ်။
ညီလေး: Kylian Mbappe အနည်းငယ်အစ်ကို7နှစ်ငယ်သူသည်ဧသန်အမည်ရှိရှိပါတယ်။ နှစ်ဦးစလုံးပါတီများ၎င်းတို့၏မိဘများကသူတို့ကိုပေးခဲ့ရသည်အကြီးမြတ်ဆုံးလက်ဆောင်တစ်ခုအဖြစ်မိမိတို့ကိုယ်ကိုကြည့်ပါ။ Kylian Mbappe တစ်ချိန်ကသူ့အစ်ကိုကသူ့ mascot ဖြစ်ခွင့်ပြုမှမိုနာကိုနဲ့သဘောတူညီချက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူသည်ချန်ပီယံလိဂ်အတွက် mascot အဖြစ်သူ့ကိုရောက်စေဖို့ Ethan အားဖြင့်ဖျောင်းဖျလိုက်ပြီးနောက်ဒါဟာဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။
Mbappe said: "သူကငျြတယျ။ ဒါဟာအကြီးအယခုအချိန်တွင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူကအိမ်မှာငါ့ဦးခေါင်းသည်ကိုခြိုးဖောကျခဲ့သညျ။ သူက " ... အိုကေငါ oonn လာ, သင်ယူပါလိမ့်မယ်" ဒါကြောင့်ငါဆိုသည်ကား, "ငါ့ကိုယူပါငါ့ကိုယူ" ဟုပြောသည်
ဒါဟာ Ethan Mbappe Kylian သည်သူ၏လက်နက်ကူးခြင်းနှင့်ဖွင့် thumbs နှင့်အတူလောကအတွက်အားဖြင့်သူ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကျင်းပအဘယ်ကြောင့်ရန်လှုံ့ဆော်မှုများ၏အကြောင်းပြချက်နှင့်အရင်းအမြစ်ကြောင်းသိရန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ Kylian Mbappe ကြောင့်သူက Playstation ရဲ့ဖီဖာအပေါ်သူ့ကို beats သည့်အခါဧသန်မကားအဘယ်သို့ဝန်ခံသည်။
Kylian အဆိုအရ, '' ဒါဟာအတူတက်လာသောငါ့ကိုမဟုတ်ခဲ့ပေ။ ဒါဟာငါ့အစ်ကို, Ethan ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူက '' ကဲ့သို့သောသူက Playstation ဖီဖာပေါ်မှာငါ့ကိုအရှက်ကွဲစရာတစ်ဦးချင်းစီအချိန်ကျင်းပ
Kylian Mbappe ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက် -relationship ဘဝ
ကျော်ကြားမှုဟာသူ့ဥက္ကာမြင့်တက်လူတိုင်းရဲ့စာရင်း is..Who အပေါ်မေးခွန်း Kylian Mbappe ရဲ့ရည်းစားဖြစ်သနည်း ...
ယုံမှားစရာမရှိ, သူ့ကိုအများအပြားအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့မျက်စိဖို့ပန်းသီးဖြစ်လာစေတော်မူပြီ။ သူဟာလျှို့ဝှက်ချက်ဖြစ်ကိုပိုမိုနှစ်သက်သောဆက်ဆံရေးအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ တချို့ပွဲ၏အဆုံးမှာMbappéတခါတရံအချို့သောမိန်းကလေးများငိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အထူးသဖြင့်အားကစားကွင်းရဲ့ကားရပ်နားအများကြီးအတွက်များစွာသောမိန်းကလေးတွေဟာသူတို့ရဲ့စူပါဟီးရိုးအဘို့အစောင့်ပါ။
မိမိအမိကိုအလိုအရ "ပဲရစ်မှာနေထိုင်နိုင်ရန်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းသမီးကနေအာရုံ၏မဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ မိုနာကိုတွင်, သူက "ဘေးကင်းသည်။
Kylian Mbappe ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက် -ပြင်သစ်ရဲ့ကြီးမြတ်နှင့်အတူတူညီကျောင်း
Mbappéအဆိုပါ Clairefontaine ထံသို့သွားလေ၏။ ဒါကအမျိုးသားရေးဖြစ်ပါသည် ဘောလုံး ပြင်သစ်ဘောလုံးကစားသမားသင်တန်းပေးအထူးပြုကြောင်းစင်တာနှင့်အကယ်ဒမီ။ သူ 2011 ၌ဤအကယ်ဒမီကနေဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်။ သူကသီယာရီအွန်နရီ, က Nicolas Anelka, ဘလဲဇ် Matuidi, Hatem ဘင် Arfa နဲ့ William Gallas အပါအဝင် Illustrious ဘွဲ့ရဂုဏ်အသရေတစ်လိပ်ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲဖြစ်သည်။
Young Mbappé Clairefontaine မှာအလွန်ကျော်ကြားခဲ့သည်။ မိမိအရည်မှန်းချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးတဲ့အခါသူကရီးရဲလ်မက်ဒရစ်အကွောငျးပွောနှင့် said: "ဒါဟာမွန်းပစ်မှတ်ထား သာ. ကောင်း၏။ သငျသညျပျက်ကွက်လျှင်လမ်း, သင်မိုဃ်းတိမ်ကိုစီးရ။ "
Kylian Mbappe ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက် -Fame မှ Rising
အမှုအရာကိုမပြောင်းခဲ့ပါလျှင်ထိုသူတို့ဇန်နဝါရီလပြတင်းပေါက်တစ်ဦးလွှဲပြောင်းရှာမယ်လို့သောနိမိတျဆိုးသတိပေးသည်မိုနာကိုမန်နေဂျာနှင့်အတူနိဂုံးချုပ်အရာမိမိအဘ၏ပေါကျကှဲခွငျး, ပြီးနောက်, လီယိုနာဒို Jadim Montpellier ဆန့်ကျင်သူ့ကို start ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ Mbappe Montpellier ၏ 6-2 အတွက်ရေလမ်းကြောင်းအကြီးအကျယ်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ပြန်ကြည့်ရှုမထားပါဘူး။
Hအီး, Rennes ကျော်ဒီဇင်ဘာလရဲ့ 7-0 လိဂ်ဖလားအောင်ပွဲအတွက် Metz ၏ဖေဖော်ဝါရီလရဲ့ 5-0 trouncing ၌သူ၏ဒုတိယသူ၏ပထမဦးဆုံးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဟက်ထရစ်သွင်းယူနှင့်သူ၏ပထမဦးဆုံးရည်မှန်းချက်ဂိုးသွင်းရန်မန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့ကာကွယ်ရေး၏စိတ်နှလုံးမှတဆင့်ထွင်းထုခြင်းဖြင့်သူ၏ပထမဦးဆုံးချန်ပီယံလိဂ်စတင်ကျင်းပ ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းနှင့်ဖွင့်မိမိအခြမ်း 2-1 ထားတော်မူ၏။
ဆယ်ကျော်သက်အဖြစ်Mbappéရဲ့ exploits မကြာမီကမ္ဘာကြီးမီဒီယာများ၏အာရုံကိုဖမ်းမိတဲ့အခါဒီဖြစ်ခဲ့သည်။
Kylian Mbappe ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက် -ကမ်းလှမ်းချက် Down ဖွင့်
ကျောင်းသားများပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကလပ် system ကိုထည့်သွင်းဖို့နှစ်နှစ်အကြာတွင် Clairefontaine စွန့်ခွာလာသောအခါ 15 ၏အသက်အရွယ်မှာ, Mbappéမိုနာကို join ဖို့, Real Madrid အသင်းချယ်လ်ဆီး, မန်ချက်စတာစီးတီး, လီဗာပူးလ်နှင့်ဘိုင်ယန်မြူးနစ်သည်အခြားလီဂူး 1 ဘက်ဆင်းလှည့်ဖို့အခွင့်သို့ပြောင်းရွှေ့ မိမိအပညာရေးကိုဆက်လက်။
Aကြိမ်မြောက်သေး, Wilfried Mbappéမိုနာကိုနှင့်အတူနေရန်မိမိသားအဘို့စိတ်အားထက်သန်ခဲ့သော်လည်းသူမိုနာကိုချလှည့်နှစ်လပြီးနောက်မန်ချက်စတာစီးတီး, Kylian ကနေ£ 40m လေလံပွဲစဉ်တွင်စတင်နှင့်သူ၏ဘူး, အောက်တိုဘာလအသုံးပြုပုံလုံလောက်သောကစားအချိန်ပေးထားမည်ဖြစ်ကြောင်းပေးအပ် သူသည် L'ပစ္စည်းကိရိယာများကိုပြောသည်အဖြစ်ဖခင်အရမ်းဒေါသထွက်သွားတယ်:
Kylian Mbappe ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက် -Breaking မှတ်တမ်း
သူ 16 နှစ်နှင့်သူပထမဦးဆုံးပိုပြီး 347 လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းထက်ကလပ်ထွက်လှည့်ကျသောအခါ 17 ရက်ပေါင်းသူဟင်နရီအားဖြင့်သတ်မှတ်စံချိန်, ရိုက်နှက်ရုံ 14 နှစ်နှင့် 20 ရက်ပေါင်းအသက်မိုနာကိုသူ့ပွဲဦးထွက်စေတော်မူ၏။
, ဖြစ်သော်လည်း Henry '' က Mbappe ဖုန်းခေါ်တရားမျှတတဲ့မဟုတ်ခဲ့ပြောဆိုကြပြီအသစ် သီယာရီအွန်နရီ'' ။ Bဆိတ်ကွယ်ရာ '' သစ်ကိုနေမာ '' သူ့ကိုဖုန်းဆက်ဖို့ပိုနှစ်သက်သူတို့ထံမှ ... အဘယ်သူမျှမကသူ၏သတိပေးလိုက်နာထားပါတယ် UT ။ သူမိုနာကိုများအတွက်အသက်အငယ်ဆုံး debitan ဖြစ်ပါတယ်။ Mbappe လည်းရည်မှန်းချက်နှုန်းမိနစ်၏စည်းကမ်းချက်များ၌ဥရောပအတွက်စံချိန်ကျိုးပျက်သို့မဟုတ်ကူညီရန်ထားပါတယ် - ပင် Lionel Messi ၏ရှေ့။
Kylian Mbappe ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက် -သီယာရီအွန်နရီတွေ့ဆုံ
ဒီအချိန်မှာ, သီယာရီအွန်နရီ သူသည်မိမိမှတ်တမ်းများနှစ်ခုကိုချိုးဖောက်သဖြင့်သူ့ကိုအပြိုင်မယ်လို့သူတစ်ဦး5တစ်နှစ်ယောက်ျားလေးနှင့်အတူနေတဲ့ရိုက်ချက်ယူပြီးခဲ့သည်ကိုသိဘူး။
ဟင်နရီ၏အဆိုအရ, "သူတစ်ဦးသည်ဆိတ်သငယ်စဉ်အခါတစ်ခါတုန်းကတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ ယနေ့သူသည်မိမိပခုံးပေါ်မှာအကောင်းတစ်ဦးဦးခေါင်းနှင့်အတူတစ်ဦးကောင်းတဲ့လူကလေးင်။ သူကအရမ်းလေးစားခြင်းနှင့်အတော်လေးတိတ်ဆိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ သူကဆုံးဖွတျနဲ့ဘယ်တော့မှတက်ပေးသည်ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာမြို့ဟောပြောချက်သည်နှင့်ဤမျှလောက်အခွက်တဆယ်ရှိပါသည်။ သူကကျွမ်းကျင်မှု, ပန်းတိုင်, ကိုကူညီပေးနေပါတယ်။ သူဟာဘောလုံးကိုနှင့်အတူလိုလားဘာလုပ်ပေးနိုင်သည်။ "
Kylian Mbappe ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက် -Christiano ရော်နယ်ဒိုတွေ့ဆုံ
အောက်ကပုံထဲက Valdebebas မှာရီးရဲလ်ရဲ့လေ့ကျင့်ရေးအခြေစိုက်စခန်းမှာ Kylian Mbappe ရဲ့ပခုံးတဝိုက် draped စီရော်နယ်ဒိုရဲ့လက်မောင်းကိုပြသသည်။ ဤတွင်သူသာ 13 ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဖြည့်ဆည်းရန်သူ၏အခွင့်အလမ်း ကို C စီရော်နယ်ဒို ကဖိတ်ကြားချက်ကိုနောက်သို့လိုက်ကြ၏ Zinedine ဇီဒန်း.
Mbappe, ဓာတ်ပုံများတွင်အတညျ့အလငျးကောင်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာသူ့နူးညံ့သောနှစ်ပေါင်းအလေးပေးဖို့ဓာတ်ပုံရိုက်ပါတယ်။ ရော်နယ်ဒို အခြားတစ်ဖက်တွင်ဖွင့်အတူတူပင်ကြည့်ရှုသည်။ Mbappe ကတည်းကအချိန်ထိုကဲ့သို့သောအတိုအာကာသအတွင်းဒဏ်ငွေလုလင်ကိုသို့ငုံထားသည်။
စီရော်နယ်ဒိုနဲ့ပုံထဲမှာဖြစ် Mbappe တူသောဆိများအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားခြင်းမရှိသံသယဖြစ်ခဲ့သည်။ ယနေ့အခုသူကမ်ဘာပျေါတှငျမိမိသွားရာလမ်းတို့ကို လုပ်. ဖြစ်နိုင်ရော်နယ်ဒိုကခြိမ်းခြောက်မှုအဖြစ်ရှုမြင်ခဲ့သည်။ ယနေ့သူသည်မိမိအရပ်နှင့်သူ့ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးရွှေဘောလုံး d'Or ရန်ခြိမ်းခြောက်မှုပါပဲ။
အလားတူပင် Paulo Dybala ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးသူ၏ "ရုပ်တုကို" အဖြစ် Lionel Messi ဖော်ပြထားခဲ့သည်။ သူဟာဘာစီလိုနာစူပါစတားကိုအတုခိုးပြီးကြီးပြင်းလာတယ်။ အဆိုပါ 2016 / 2017 ချန်ပီယံလိဂ်မှာတော့ Dybala ဟာနောက်ကောက်ဇာတ်စင်ထဲကသူ့ကိုတွန်းချ။ အချိန်အားဖြင့်လူမိုက်ကံကောင်း။ ဒါဟာစဉ်းစားရန်ညှိုးငယ်ပေမယ် Lionel Messi နှင့်စီရော်နယ်ဒိုမရှိတော့ကစားကြသောအခါနေ့ကိုရောက်လာပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ဟာသွားပြီလိမ့်မယ်များနှင့်သာအမှတ်တရများရှိပါလိမ့်မယ်။
Kylian Mbappe ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက် -သူများတွေဘာသူ့ကိုအကြောင်းကိုပြောပါ
"Mbappéအလွန်ကောင်းသောကစားသမားဖြစ်ပါတယ်။ ယခုသူသီယာရီအွန်နရီနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျက်ရှိသည်နှင့်သူ့ကိုတူသောပါဝင်သည်။ သူကငယ်ရွယ်ပေမယ့်သူကဤကဲ့သို့သောတိုးတက်စေရန်ဆက်လက်ပါလျှင်သူသေချာများအတွက်အမျိုးသားရေးအသင်းများအတွက်ကစားပါလိမ့်မယ်။ " Bacary Sagna ။
"သူကအတိအကျသီယာရီအွန်နရီသည်မဟုတ်ပေမယ့်သူကအလားတူအရည်အသွေးတွေရှိပါတယ်နှင့်အနာဂတ်နှင့်အခွက်တဆယ်နှင့်ဆင်တူကြောင်းမှန်သည်။ သူ Thierry ရှိကြောင်းလှုံ့ဆျောမှု, အလိုဆန္ဒနှင့်ထောက်လှမ်းရေး၏တူညီသောအဆင့်အထိရှိပြီးပါကအလားအလာသောနောက်, အလားတူဖြစ်ပြီး, လာမယ့်နှစ်နှစ်, သုံးနှစ်ထို့နောက်သူကအရမ်းအလားအလာရှိနိုင်ပါသည်, ထိုကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြလိမ့်မယ်။ " အာဆင်နယ်အသင်း Wengr.
"သူက 18 အသက်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သူမအံ့သြဖွယ်ပါပဲ။ ညာဖက်က start ကနေကျနော်တို့မြင်သူဥပမာဘောလုံးကိုထိသူ့လမ်းထဲတွင်အနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားသောကစားသမားဖြစ်ခဲ့သည်သိတယ်။ သူကအထူးတစ်ခုခုရှိကြောင်းဂိမ်းတစ်ခုရှိပါတယ်။ ကြောင်း၏ထိပ်တွင်သူတွေအများကြီးအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ကျွန်မသူကိုအခေါင်းစဉ်အနိုင်ရကူညီဆက်လက်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ " Bernardo ဆေးလ်ဗား.
"သူကအခွက်တဆယ်ရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်မငြင်းနိုင်သောဖြစ်ပါတယ်။ သူကတကယ်အလားအလာရှိပြီးကျနော်တို့ကသူရုရှားမှာပါလိမ့်မည်အလောင်းအစား။ " LifeBogger ။ "
Kylian Mbappe ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက် -အဆိုပါ Bromance
Gianluigi Buffon သည်ဂျူဗင်တပ်စ်ဂိုးသမား, ပြင်သစ်အတွက် 1998 ကမ္ဘာ့ဖလားများအတွက်အီတလီနိုင်ငံရဲ့ကစားသမားအတွက်အမည်ရှိသောအခါရှေ့ဆက်မိုနာကိုပင်မွေးဖွားမခံခဲ့ရပါဘူး။
ထိုအ Mbappe အဘို့, သောသူသည်လွန်ခဲ့သောလေးမှမိုနာကိုရဲ့ပြေး၏စတော့ရှယ်ယာကြာတဲ့အခါမှာသူကမာနထောင်လွှားနှင့်အတူပေါ်ထင်ဟပ်နိုင်ပါတယ်စာရင်းဇယားတစ်ခုအရေအတွက်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ 2016 / 2017 ရာသီအတွက်ခြောက်လုံးချန်ပီယံလိဂ်ဂိုးသည်သူ၏တာလီချိုးသူရာအူးလ်အဖြစ် 19 ရှေ့တော်၌ထိုယှဉ်ပြိုင်မှုအတွက်ရည်မှန်းချက်များ၏တူညီသောအရေအတွက်ကသွင်းယူထားပြီးဆိုလိုသည်။
Kylian Mbappe ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက် -လျင်မြန်စွာအိုမင်း
တနည်းကား, သူ့မျက်စိမှာတွေ့ရှိအရေးအကြောင်းတွေ။ ဤသည်ကသူ၏င့်ကျက်မှုနှင့်ထောက်လှမ်းရေးဖြည့်ဘူး။
Kylian Mbappe ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက် -အဘယ်သူမျှမဇိမ်ခံကား
စာအရေးအသား၏အချိန်ကအဖြစ်, Kylian နေဆဲမိုနာကိုလေ့ကျင့်သင်တန်းဘော်ဒါဆောင်တွင်နေထိုင်သည်။ ကျော်ကြားမှုကိုသူ၏ခေါင်းပေါ်ရ doesnt ဒါကြောင့်မိမိအ plan ကိုအနိမ့်နှင့် grounded တင်. ရန်ဖြစ်ပါသည်။ သူ့မိသားစုကိုလှည့်ပတ်ဖြစ်တဲ့အခါ, မိမိမိခင်, ဖခင်နှင့်အနည်းငယ်သာအစ်ကိုနှင့်အတူနေရန် domitary အရွက်
Kylian ဆဲလေ့ကျင့်ရေးစင်တာမှာမိမိအခန်းတစ်ခန်းရှိပါတယ်။ သူဟာသို့သော်တစ်ခုပူးတှဲပါရေကူးကန်နှင့်အတူတစ်ဦး villa မတတ်နိုင်ဖို့နည်းလမ်းရှိလိမ့်မယ်။ သို့သော်သူ၏အရာမဟုတ်ပါဘူး။ သူကသူတို့လမ်းကိုဆုံးရှုံးခဲ့သူအချို့အသင်းဖော်များ၏မလိုအပ်သောအလွန်အကျွံမမြင်စဖူး။ သူ့ကိုကာကွယ်ပေးရန်, ငါ (အကယ်ဒမီ) အလယ်ဗဟိုတွင်ဆက်နေရန်သူ့ကိုယုံကြည်စိတ်ချသွားတယ်။ သို့သော်အနီးဆုံးအနာဂတ်အတွက်မိမိ၏နေရာတစ်နေရာရဖို့မျှော်လင့်ပါသည်။ သူ့ဖခင်ကပြောပါတယ်။
Kylian Mbappe ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက် -LifeBogger အဆင့်
ရောဘတ် သြဂုတ်လ 6, 2018 တွင် 11: 04 နံနက်
Kylian သူ၏ပခုံးပေါ်မှာအကောင်းတစ်ဦးဦးခေါင်းနှင့်အတူအလွန် grounded လုလင်ကဲ့သို့ပုံရသည်။ ငါသည်သူ၏အဘသည်ခြောက်၏နူးညံ့သောအသက်အရွယ်မှာသူ့ကိုလေ့ကျင့်ဖွင့်ဖို့အမြော်အမြင်ရှိခဲ့ဒါသည်ဝမ်းမြောက်မိပါတယ်။ အခုတော့အားလုံးမာအလုပျကိုချွတ်ပေးဆောင်နေပါသည်!
Detra သြဂုတ်လ 7, 2018 တွင် 8: 54 နံနက်
ဒါဟာထိုကဲ့သို့သောကလေးဘဝဇာတ်လမ်းကိုဖတ်ရှုဖို့ကောင်းတဲ့ပါပဲ။ ဤအလာမည့်တို့နှင့်ကြီးသောဘောလုံးသမားများအကြောင်းကိုသိရန်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ ဒါဟာကောင်းတဲ့စာဖတ်ခြင်းဖြစ်ခဲ့သည်။
Isabel သြဂုတ်လ 7, 2018 တွင် 9: 11 နံနက်
သင်လိုအပ်သမျှအောင်မြင်ရန်ခဲယဉ်းအလုပ်လုပ်တစ်ခုရှုထောင့်အစဉ်အမြဲရှိပါသည်။ Mbappe ကောင်းတဲ့ကောင်လေးနှင့်သူဝေးသွားတာသေချာပါရဲ့။
Jonna Mayo အဘိဓါန် သြဂုတ်လ 7, 2018 တွင် 9: 49 နံနက်
Lavonia K သည် သြဂုတ်လ 7, 2018 တွင် 6: 33 ည
wow, အရာအားလုံးအကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်။ ငါကပဲသူကိုကူးသည်သူ၏လက်နက်တို့နှင့်မိမိရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကျင်းပသောလေထုထဲကနေခဲ့တာထင်ခဲ့တယ်။ ဒါဟာနောက်ကွယ်ကအကြောင်းပြချက်ရှိခဲ့ပါသည်ထုတ်ပြန်သွားလေ၏။
လှံတံက Silvers သြဂုတ်လ 7, 2018 တွင် 6: 59 ည
ကျနော်တို့ရရှိမတိုင်မီတွေအများကြီးဖြတ်သန်း။ ဒါဟာသင့်ရဲ့အချိန်အတော်များများအပျနှံခြင်းမရှိဘဲထိပ်တန်းရောက်ရန်မလွယ်ကူပါဘူးပါပဲ။ ဒါဟာအစခက်ခဲအလုပ်နှင့်စိတ်အားထက်သန်မှုကြာပါသည်။
လူသား သြဂုတ်လ 7, 2018 တွင် 7: 12 ည
ဒါဟာ Mbappe ၏ထိုကဲ့သို့သောကောင်းတဲ့အတ္ထုပ္ပတ္တိကိုဖတ်ပြီးလျှင်အကြီးဖြစ်ခဲ့သည်။ ကိုယ့်ဆောင်းပါးမြင်ဖတ်တှနျ့ဆုတျခဲ့ပါဘူး။ သူ့ကိုငါကနေအများကြီးသင်ယူကြသည်။
ပါပလော သြဂုတ်လ 7, 2018 တွင် 7: 36 ည
အမြဲလိုပဲ, ကသင်ပြုသမျှအတွက်စိတ်ရှည်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ သငျသညျစောင့်ဆိုင်းရသောအခါကြီးသောအမှုတို့ကိုဖြစ်ပျက်။ အဘယ်သူမျှမအလုအယက်ရှိပါသည်။ ဟုသူကပြောသည်တူသောဒါ့အပြင်တစ်ခုကိုရေတွက်ကြောင်းအလုပ်ကြိုးစားတဲ့ပါပဲ။ သင်ပြုသမျှအတွက်တက်ကြွစွာဖြစ်ခြင်း။
Dominque အိမ်ထောင်မကျခင် သြဂုတ်လ 7, 2018 တွင် 7: 50 ည
ငါကြားဘယ်တော့မှခဲ့သောကျွန်မမှတဆင့်ဖတ်ပါပွီဟုသောအရာတို့ကိုအများကြီးရှိပါတယ်။ ငါကပဲအတိုဇာတ်လမ်းဖြစ်ခဲ့သည်ထင်ပေမယ့် Mbappe ရဲ့အသက်တာ၌ဖြစ်ပျက်သောအရာတွေအများကြီးရှိခဲ့ထုတ်ပြန်သွားလေ၏။
dont ခ သြဂုတ်လ 8, 2018 တွင် 3: 59 နံနက်
Mbappe အခြားကစားသမားနှိုင်းယှဉ်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားမိသားစုဘဝရှိပါတယ်။ သူကမျိုးရဲ့နေထိုင်ရန်အဆောင်များမှာမိမိနေထိုင်ကြိုက်တယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူကအများကြီးအောင်မြင်နေဆဲဝေးသွားကြဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်။
ဘရတ် သြဂုတ်လ 8, 2018 တွင် 4: 05 နံနက်
Mbappe ကသူ၏ဇာတ်လမ်းထဲမှာအများကြီးရှိပါတယ်။ ငါသူသည်မိမိငယ်ရွယ်စဉ်အတွက် Christiano ကတွေ့ခဲ့တဲ့မသိခဲ့ပါ။ သူသည်ကောင်းနှင့်နေဆဲကျနော်တို့လာမယ့်ရာသီလာအထံတော်ကစွမ်းဆောင်ရည်ကြည့်ဖို့စောင့်ဆိုင်းနေကြ
နှင်းဆီ သြဂုတ်လ 8, 2018 တွင် 4: 21 နံနက်
ကား Agbor နိုဝင်ဘာ 22၊ 20182တွင် - 16 ည
မိဘမှတက်လက်မ! Mbappe ငါသည်သင်တို့၏ playstyle ကိုချစ်ဒါကြောင့်လုံ့လရှိသူ, သင်ကစက်ဘီးကဲ့သို့ပြေးငါနဲ့တူ wow ပေါ့! ကျွန်မပထမဦးဆုံးအသငျသညျ play မြင်လျှင်, ငါသီယာရီအွန်နရီကိုမွငျလြှငျ, ငါ, ငါ့ဘောလုံးသည်ရုပ်တုတို့နယ်ကိုမြင်တော်မူ၏။ သင့်ရဲ့ဘောလုံးလေယာဉ်တင်သင်္ဘောအားလုံးကိုအကောင်းဆုံး။
Alicia Hudson နိုဝင်ဘာလ 26, 2018 တွင် 7: 55 နံနက်
Lottin Mbappe နေပါစေဘယျအရာတစ်ဦးကဖြစ်ရပ်ဆန်း IS ။ သူ့ရဲ့ Beauty မိဘများကိုကျေးဇူးတင်။ MBAPPE ကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံး Idol IS ငါသည်ထိုသူကို vous ETES မွန်မော်ဒယ်ဤမျှလောက်လေးစားပါတယ်။ ကျွန်မအင်္ဂလိပ်, အာဖရိက, ဇူလူ AND ထားတဲ့ IM နေဆဲငါသူ့ကိုအရမ်းလေးစားမိပါတယ်ပုံ MY Idol ပြောပြပြင်သစ် SO ငါ CABN ပြောဆိုရန်ပုံကိုလေ့လာပြောတောင်အာဖရိက AM
Tiwonge chauma 16 တွင် 2019၊5- 15 နံနက်
သငျသညျ ur အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့်အတူတိုးတက် r အဖြစ်ဈသင်တို့ရှိသမျှကိုအကောင်းဆုံး him.wishing ထံမှ alot သင်ယူကြပါပြီအလွန် NYC ကလေးဘဝ
Nabil Fekir ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
Corentin Tolisso ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်